Indlela yokunquma iilebe ekhaya: iifoto namavidiyo
Ukuchaneka njani ukusika amanqabana? Iimpawu zentshontsho zeenwele.
Ukunyuka kwe-Haircut yeenkibi kuyenziwa kungekuphela nje ukubanika ukubonakala okufanelekileyo, kodwa nokulungisa indlela ebusweni bomfazi. Iifom zefomu echanekileyo zivumela ukuba wenze umfanekiso ocacileyo ngakumbi, ngoko kubalulekile ukwenza konke ngokufanelekileyo. Ukuba awuzange wenze oko ngokwakho, sinokucebisa ukuba uye kwi-salon okanye ufumane okungakumbi malunga nenkqubo. Musa ukuthatha ingozi, kungcono ukuqala ngokulula kweenwele.
Izixhobo eziyimfuneko zokusika iinki ezinqunywe ngefomu Masifinyelele kwiinqwelo zeenwele Iimpawu kunye neengcebiso Ividiyo njani ukunqumla iilebe zakho ngokuchanekileyo
Izixhobo eziyimfuneko zokusika iinki
Ukunquma iilebe zakho ekhaya, uya kufuneka:
Iiswele zokusika iinki
Kwinkqubo yokusebenza uya kuqonda ukuba yiyiphi ithuluzi efanelekileyo kakhulu ukuba uyisebenzise kwaye ngexesha elizayo unokwenza ngesinye isiqwenga okanye nje si-trimmer. Kukulungele ukuba abanye besetyhini basebenzise i-brush kwi-carcass endala endaweni yekhefu ngamaconco.
Cebiso! Kungcono kumqali ukuba angasebenzisi isilmzi kuyo yonke into, njengoko ukuhamba okungahambi kakuhle kungaphazamisa yonke into.
Zonke izixhobo ezisetyenziswayo kufuneka ziphathwe ngotywala ngaphambi komsebenzi. Akukho nto ibaluleke kakhulu apho uceba khona ukwenza inwele. Nika ingqalelo ekukhanyeni, kukulungele ukulungiselela ukukhanya okungafaniyo, kungabikho izithunzi ezisebusweni.
Umntu ngamnye unendlela ehlukeneyo yamashiya. Ngako oko, musa ukukopa ifomu efanelekileyo kwintombi yakho, zama ukufumana into efanelekileyo kuwe. Ukwenza oku, udinga ipencil okanye ibrashi, okanye ungasebenzisa ikhefu.
Qala ekupheleni. Ukwenza oku, faka ipensela kwiphiko lempumlo, udlula ekhoneni eliphezulu lelihlo phezulu. Xa isiphelo sakhe sizakuphela kweshiya lakho. Inqaku eliphakamileyo lichanekileyo ngokuchanekileyo, kodwa ipencil kufuneka isetyenziswe ebusweni kwaye iholele kwiphiko lempumlo.
Kubalulekile! Ukuqala nokuphela kweshihlo kufuneka kube kumgangatho ofanayo.
Iimvumba zakho akufanele zibe zininzi okanye zincinci. Jongani ubuso bakho, iimpawu zayo ziza kubangela ukuba yeyiphi iqondo eliza kuba lihle.
Yonke inkqubo ilula kakhulu, njengesithombeni, kodwa idinga ukunyaniseka nokuqwalasela. Amacwecwe anqunywe ngezigaba eziliqela:
Okokuqala kufuneka udibanise kwaye udibanise.
Ukuba ezinye zeenwele ziphuma kwinqaba, zinqumle nge-trimmer okanye iisisi.
Emva koko udibanise.
Izithethi ezingaphezu kweenwele ziyakunqumla.
Emva koko, zidibanisa iinki zakho kunye nomgca wokukhula kweenwele.
Izixhobo kunye neengcebiso
Ukuze zonke izinto zenziwe ngendlela efanelekileyo, nqakraza kuqala iinki kwaye uze uqale ukutshitshiswa.
Le nkqubo ayiphumeli, ngoko qaphela ukuba unayo ixesha elaneleyo. Ukuba wenza into engalunganga, kuya kufuneka uhambe malunga neenyanga ezimbini kunye neenqatha ezingabonwanga, kuba iinwele ezinqunywe zikhula ngokukhawuleza.
Musa ukuyithwala, iinwele ezimfutshane ziya kuba zimbi.
Yenza isilungiso nganye kwiiveki ezintathu.
Ukucocwa kwamacwe ekhaya kufuna ukucocwa, ngoko ungagqibi. Amaconco amahle, njengesithombeni - nje umphumo wokuchaneka kunye nobuchule obuchanekileyo bokuphunyezwa. Yonke intokazi inokufunda indlela yokwenza oku kwaye ijonge phambili.
Ividiyo ekunciphiseni amaconco ekhaya
Ukuze kucaciswe, sincoma ukubukela ividiyo yeenkibi zokusika iinwele.
Yintoni enokuyenza imiski entanyeni?
Izikhwama kunye nezijikelezo phantsi kwamehlo
"Uncedo lokuqala" kwisikhwama sakho sokuzicoca
Indlela yokuphatha ubuso bakho imihla ngemihla
I-Blepharoplasty yeentloko zeelesi
Ndingayithulisa njani amehlo am
I-Hyaluronic acid ye-lip augmentation
Jam kusuka kwi-gooseberry - zokupheka kunye nesiteyathelo isinyathelo ngesinyathelo
I-Horoscope kwizinto ezithandayo, ukuhambelana kwe-horoscope
Indlela yokuxhobisa isicwangciso sekhaya
Umtshakazi kaNikita Presnyakova wagubha usuku lwakhe lokuzalwa lwama-19 kwi-club ye-karaoke
IBhunga kunye nothando: kwaziwa igama lomyeni u-Olga Buzovoy
Imenyu yemihla ngemihla yezidlo ezimnandi
Kwaye kutheni abantu abanobukhohlakali bebubele
I-Endometriosis yomlomo wesibeleko: unyango
Amadoda okwenene - izipho zangempela
Umthandazo ngokukhawuleza ngaphambi kwePasika - imihla ngemihla, ngaphambi kokutya, kusasa nangokuhlwa - Ukufunda umthandazo kaEfrayim umSiriya ngeLente
Intombi kaAna Samokhina - Sasha Samokhin